Rahmata nuuf kenname - NuuralHudaa
Rahmata nuuf kenname
Rabbiin ol tahe Nabiyyii salallaahu aleeyhi wasallam rahmata aalama hundaaf godhee erge. Rasuulli ﷺ waa’ee isaa hoggaa dubbatu, “Ani Rahmata kenname” jechuun if ibse. Kennaa Rabbi biraa aalamaaf kennamte tahuu isaati nuuf hime. Rabbiin ol tahe Qur’aana keeysatti, “Yaa Ergamaa kiyya Muhammad, Rahmata aalamaa akka taatuuf malee nuti si hin ergine” jechuun Nabiyyiin ﷺ rahmata nuuf kenname tahuu nuuf hime. Al-Anbiyaa: 107.
Nabiyyiin ﷺ ilmaan namaa karaa jannata Rabbitti geeysutti nama yaamuuf rahmata tahee adunyaaf kenname. Rabbiin ol tahe akki ja’uun, “Ati yaa Ergamaa kiyya Muhammad, karaa qajeelaa nama akeekta, qajeelchita” Ash-Shuuraa: 52.
Iimaanaa fii Rahmaanni waan lama walitti hidhamaa addaan hin baane. Hanguma gabrichi Rabbii isaa gabbaruun rahmanni inni waan hundaaf qabu dabalaa deema. Hanguma Rabbirraa fagaatuun ilmi namaa rahmanni inni waan hundaaf qabu gad bu’aa deema. Iimaana inni qabuun hangi ilmi namaa waliif rifatu wal caala. Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e, “Warra rahmata namaaf godhuuf Rabbi abbaa rahmaatuu mararfataaf, warra lafa keeysa jiruuf rifadhaa, mararfadhaa, kan samii ol jiru isiniif rifata, isin mararfata”.
Nabiyyii rahmataa ﷺ jala warri deemu waan hundaaf rahmata fii rifannoota qaban.
Namni Nabiyyitti ﷺ hidhate lubbuu isaatiif rahmata godha, waan hin dandeenyetti if hin dirqu, lubbuu isaa halaakatti hin geeysu.
September 22, 2021 sa;aa 5:44 am Update tahe